‘Mo Farah Waa Ciyaartoyga Ugu Weyn UK, Daroogo Ma Isticmaalo Laakiin…’
HomeWararka Maanta‘Mo Farah Waa Ciyaartoyga Ugu Weyn UK, Daroogo Ma Isticmaalo Laakiin…’
01/01/2017 Abdiwahab Ahmed
Mo Farah ayaa lagu daray liiska dadka sharfaneyaasha waddanka Boqortooyada Britain, waxaana hadda kaddib loogu yeedhi doonaa Sir Mo.
Haddaba, wariyaha idaacadda iyo telefishanka BBC ee Foster, ayaa ka hadlay sida uu u arko Mo Farah, balwadihiisa iyo ciyaaraha UK halka uu kaga jiro.
“Sharaf ayey u tahay Mo iyo ciyaartooyada oo dhan. Aragtidayda, Mo waa ciyaartoyga ugu weyn ee waddanka Britain soo mara.” Sidaas ayuu yidhi Foster.
Isaga oo hadalkiisa sii wata, waxa uu yidhi: “Waxa xaqiiqo ah in Mo uu tan iyo 2011 ugu sarreeyey ciyaartooyada, mana jiro shakhsi Britain ah oo ciyaara oo guulaha uu gaadhay iyo wakhtiga uu dunida haystay gaadhi kara.”
Codbixin dadka laga qaaday, ayaa muujisay in Mo Farah aan lagu darin dadka sharfaneyaasha ay u arkaan, laakiin liiska rasmiga ah oo qasriga boqortooyada laga soo saaray ayaa uu ka mid noqday, waxaana mar uu ka halday uu ku tilmaamay riyo u rumowday.
“Waa riyo ii rumowday. Waan ku faraxsanahay abaalmarinta sharafta leh ee cajiibka ah ee iiga timid waddankan oo ahaa dalkayga tan iyo markii aan imid anigoo siddeed jir ah.” Sidaas waxa yidhi Mo Farah.
Damaashaadkii Tababare Rodgers Ee Guushii Celtic
Watch: Amiens vs PSG 0-2 All goals & Highlights
Maxaa Ku Dhacay Mo Farah….? – Kaftanka Orodyahanka Reer Ingiriis